Tabarucii lagu bixinayay xubnaha jidhka oo hoos u dhacay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
tabarucii lagu bixinayay xubnaha jidhka oo yaraadayFoto: Jack Mikrut / Scanpix Sweden / TT.
Tabarucii lagu bixinayay xubnaha jidhka oo hoos u dhacay
La daabacay tisdag 20 januari 2015 kl 13.00
Waxa hoos u dhacay tabarucii lagu bixinayay xubnaha jidhka aadama,kadib markii la xidhay goobo badan oo caafimaad, iyada oo ay ugu wacan tahay kalkaalisooyinkii goobahaasi ka shaqo gali lahaa oo yaraaday.
Anders Milton oo dawladda u qaabilsan arrintan ayaa sheegay haddii la furi lahaa goobo caafimaad oo badan oo arrintan ka shaqeeya in la heli lahaa dad badan oo ku deeqa xubnahooda jidhka. Qiyaas uu sameeyay ururka u dhaqdhaqaaqa tabarucaadka xubnaha jidhka ee magaciisa la yidhaa MOD ( Mer organdonation), ayaa sheegay in halkii toddobaadba uu hal qof u dhinto caawimo la'aan uu waayay in xubin( orgon) ugu deeqda.
Kristina Hambraeus oo ah dhakhtar heer sare ah oo ka hawlgasha cisbitaalka jaamacadda Karolinska aayaa sheegtay in ay lagama maarmaan tahay in la helo kalkaalisooyin aqoonsare leh, si ay u shaqeeyaan goobaha lagu qaabilo xubnaha ay dadku ku deeqayaan. Waxaana hadalkeedii ka mid ahaa:
- Hadda ma jiraan goobo hawshaasi qaabilsan. Si kor loogu qaado tirada xubnaha aadamaha ee lagu deeqayo waa in la helo goobo caafimaad oo heersarreeya. Waxa innagu yar kalkaalisooyinka caafimaadka, taasina waxa ay keentay in ay gaabaabsi noqdaan goobaha lagu qaabilayo xubnaha jidhka dadku. Haddii aynu kalkaalisooyin heli lahayn way innoo dhib yaraan lahayd in aynu furno goobo badan.